Daalibaan oo goob fagaare kusoo bandhigay meydadka afar qof oo lagu eedeeyay falal afduub ah - Bulsho News
Daalibaan oo goob fagaare kusoo bandhigay meydadka afar qof oo lagu eedeeyay falal afduub ah
Dagaalyanahanda oo howlgal lagu sugayo amniga ka sameynayo waddooyinka magaalada Herat
Kooxda Daalibaan ayaa sheegtay in meydad afar ah ay kusoo bandhigeen goob fagaare ah oo ku taalla magaalada galbeedka dhacda ee Herat.
Meydadkan ayay kasoo laalaadiyeen goob si digniin ay ugu diraan kooxaha wax afduubta, afarta qof ee la dilay ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falal afduub ah oo laga fuliyay halkaas.
Dhacdadan naxdinta leh ayaa imaaneysaa xilli sarkaal sare oo ka tirsan Daalibaan uu sheegay in ciqaab xad dhaaf ah sida dil iyo gacan goyn ay ka billaaban doonaan Afghanistan.
Raggan meydadkooda lasoo bandhigay ayaa la dilay kadib markii ay rasaas isweedaarsadeen iyaga iyo Taliban, waxaana lagu eedeeyay inay qafaasheen nin ganacsade ahaa iyo wiilkiisa, sida saraakiisha gudaha ay sheegeen.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxaa loo sheegay in mid kamid ah meydadka laga soo laalaadiyay wiish gudaha magaalada si farriin loogu diro kooxaha dadka afduubta.
Wazir Axmed Seddiqi oo dukaan ku heysto magaalada ayaa AP u sheegay in afarta meydadka ah lagu soo bandhigay goob fagaare ah halka midkood laga soo laalaadiyay goobta si shacabka ay u arkaan.
Ku xigeenka barasaabka magaalada Herat, Maulwai Shair Ahmad Emar oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dagaalyahanada Daalibaan ay baacsadeen dadkan looga shakiyay inay ku lug lahaayeen falalka afduubka ah isla markaana ay dileen.
“Waxaan meydadkooda kasoo laalaadinay fagaaraha Herat si digniin ugu dirno kooxaha wax afduubta” ayuu yiri sarkaalka.
BBC-da, si madaxbanaan uma xaqiijin karto sababta ka dambeysay dilka raggan.
Si kastaba, muuqaallo naxdin leh oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay meydadka oo uu dhiig ka da’yo xilli midkood wiish laga soo laalaadiyay.
Halka muuqaal kale uu muujinayay nin kamad ah dadkii soo bandhigayay meydadka oo xabadka garaacanayo xilli uu sheegayay, “Dadka wax qafaasha waa in sida oo kale loo ciqaabaa”
Cristiano Ronaldo Oo Isha Ku Haya Rikoodh Kale...